Wejigii labaad ee tababarka tababarayaasha (ToT) oo loo soo gebagebeeyay hawlwadeennada GMDQ – GMDQ
Wejigii labaad ee tababarka tababarayaasha (ToT) oo loo soo gebagebeeyay hawlwadeennada GMDQ
Intii u dhexeysay 7 – 10ka Abriil magaalada Muqdisho waxaa hawlwadeennada Guddiga loogu qabtay wejigii labaad ee tababarka tababarayaasha. Wejiga koowaad ee tababarka ayaa waxaa uu qabsoomay bilowga bisha Maarso.
U jeeddada tababrkaan ayaa ahayd in shaqaalaha Guudiga laga dhiso xirfadaha tababarenimo si ay tababareyaal ugu sii noqdaan shaqaalaha ka hawl geli doona goobaha diiwaan gelinta iyo cod bixinta.
Tababarkaa waxaa Iska kaashadey hay’adaha kala ah Building Resources In Democracy Government And Elections (BRIDGE) iyo kooxda isku dhafka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan taageerada doorashooyinka
Soomaaliya (IESG)Tababarka waxaa daadihin ayay tababareyaal ka socday BRIDGE Ms. Bridget Masuluke and Ms. Rindai Chipfunde Vava oo si heer sare ah hawlwadeennada Guddiga ugu soo gudbiyay xirfado ka saacidi doona iney gudbiyaan tababrro dhax gal ah.
Tababarada noocaan ah ayaa loogu talo galay in lagu dhiso tayada hawlwadeennada si ay uga soo baxaan howlaha baaxadda leh ee horyaal Guddiga.
Waxaa la faafiyey April 11, 2019 April 17, 2019